Akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara Ụlọikpe Obodo Ukwu Obodo Federal Federal na Nigeria & ụwa | TAA
NACA iji lelee nje HIV buru ibu n'etiti ndi mmadu
Senate na-akpọ maka ọnọdụ mberede maka igbu ọchụ Benue
US na-adọ aka ná ntị na ndị njem 'njem' na-agba mbọ ịbanye
President Buhari na-adịgide ndụ na-achọ ịma ọkwa na Senate
Fans Liverpool na-eche nche nchebe mgbe niile na Rom
Ex-Manchester United nchịkwa Louis van Gaal setịpụrụ maka nlọghachi ...
Sadiq Umar: M ga eweta ihe dị iche na mwakpo Super Eagles
Gernot Rohr: Francis Uzoho nwere ihe ize ndụ nye 2018 World Cup
Home Tags Ụlọikpe Kasị Elu Federal Federal Territory
Ụlọikpe Kasị Elu Federal Federal Territory
EFCC: Fraudsters na-enyere ndị na-elekọta omenala aka ịghọ aghụghọ
Ikpe nke Balarabe Abdullahi na Usman Yusuf (ndị dị ugbu a) ndị ikpe na-ahụ maka ego na ego, EFCC, maka ịgbagha nọmba ekwentị nke Abdulmumini Bako, onye bụbu onye nnyemaaka pụrụ iche na onye bụbu Comptroller General nke Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Nigeria, Abdullahi Dikko, gara n'ihu na March 5 na-ekpe ikpe na-agba àmà nke atọ.
Senator Dino Melaye jidere n'Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT
A na-ekpechite Senator nke na-anọchi anya Kogi West taa na Ụlọikpe Kasị Elu Federal na-agbaso akwụkwọ uwe megidere ya site n'aka ndị gọọmentị Federal na-ekwu na ebubo ụgha a na-ekwu.
Ikpe ziri ezi Walter Onnoghen na-eduzi ụlọ akwụkwọ iwu iji zipụ ụmụ akwụkwọ na ụlọ ọrụ ADR naanị
Ikpe ziri ezi Walter Onnoghen, Onyeikpe Kasị Elu nke Nigeria, eduzila Ụlọ Akwụkwọ Iwu Naijiria iji zipu ụmụ akwụkwọ na-agbakwunye naanị ndị ọrụ iwu na Ngalaba Ntugharị Mgbanwe ọzọ.
Ụlọikpe ahụ jụrụ onye ebubo ebubo na ọ na-egbu Maryam Sanda
Ụlọikpe Kasị Elu nke Federal Capital Territory egbuola akwụkwọ maka ịgbaghara site na nwunye nwa nke onye isi oche nke ndị omeiwu Peoples Democratic Party, Haliru Bello.
EFCC na-ebu Stallion Motors, MD n'ụlọikpe n'ihi ebubo na N1.275bn 'onyinye' nye PDP
Usoro ikpe mkpegbu nke Economic and Financial (EFCC) ebubo ebubo na nnukwu ụlọikpe Federal Capital megide Stallion Motors Limited na Onye isi nchịkwa ha, Hapreet Singh, n'ihi na ebubo na ọ na-enye N1.275 ijeri na ndị PDP (PDP) maka ntuli aka 2015 .
ICPC bu onye osote, onye nduzi ndi nduzi nke onu ahia N5
Ọrụ ndị na-emebi iwu na ndị ọzọ na-akpata mmejọ iwu (ICPC) bugara onye isi nchịkwa na Federal Ministry of Works, Mr Mohammed Musa Abimiku, ikpe ikpe maka n4.5 nde na-arụ ọrụ.
Ụlọikpe na-enye ndị ọchịchị iwu ka ha jeere onye omeiwu Isah Misau ebubo ebubo
Onye isi ikpe nke Ụlọikpe Kasị Elu Obodo Ukwu, Ikpe Ikpe Ishaq Bello, ụnyaahụ, nyere iwu ka Gọọmenti Federal kwadoro na Senator na-anọchi anya Bauchi Central Senatorial District, Isah Misau, onye omempụ na-ebo ya ebubo.
Otu ndi isi nke ndi isi ochichi malitere nyocha nke ndi agha n'ihi ebubo ndi ozo
Ụlọ ọrụ Nyocha nke Ndị Isi na-atụle nrubeisi nke ndị agha na ihe ndị ruuru mmadụ na iwu nke nnyekọrịta malitere ịbanye na Abuja taa (Monday).
NACA iji lelee oke HIV n'etiti ndi mmadu
Otu National Agency for Control of AIDS (NACA), na Thursday, bụ ịmalite ịrụ ọrụ na ndị nweere aka iji chọpụta oke nje HIV n'etiti ndị isi obodo gụnyere ndị oke idina nwoke.
Senate akpọgala gọọmenti etiti gọọmenti na-ekwupụta ọnọdụ mberede na mba Benue na mba ndị ọzọ na-eche ihe ike egwu egwu.
Ndi United States choro ijide ndi 100 Central American ndi njem ma oburu na ha gbaliri isipu na United States na Mexico ebe ha gbakotara, na-eme ka President Donald kpebie inye ndi agha aka n'uwa.
Na-eme egwuregwu na 'Smoke-Free World', Team Neon nke Nigeria mere ya na njedebe ikpeazụ nke asọmpi ahụ, nke a ga-enwe n'oge 2018 Spirit nke Innovation Summit na Kennedy Space Center, site na 25th na 28th April, 2018.
Ndị na-agba Liverpool ga-enwe ndị uweojii mgbe nile iji chebe ha na Rom mgbe ha na-eme njem na obodo maka agbachitere ndị agbụrụ ha n'akụkụ nke abụọ na-esote izu abụọ, dị ka Sky Italy.
HRW: Ndị agha, esemokwu ndị uweojii na ndị obodo n'obodo Zimbabwe '
Ọtụtụ puku obodo ndị dị na Marange diamond n'ubi Zimbabwe a na-ezute na izu a site na ndị agha na ndị uweojii agha, bụ ndị na-akwagasị ha ka ha na-eme mkpesa na mwepụ nke ego diamond ahụ.
Onye NPC aha ya bụ Saadu Alanamu gọrọ na a tụrụ ya mkpọrọ
Saadu Alanamu, onye isi oche nke gọọmenti na-achị achị nke Kwara State Polytechnic, na-ekwu na esiteghị ya n'ụlọ mkpọrọ.
Arụ ọrụ siri ike nke Mohamed Salah enyela ya 2017-18 PFA Player of the Year, dịka onye nọnyeere Liverpool na-akpọ Danny Ings.
Gọvanọ Isaac: Ndị agha, ndị na-azụ atụrụ na-atụ egwu ndị m
Gomina Gọọmenti Taraba, Darius Ishaku, etiwo mkpu banyere ihe ọ kọwara dị ka ọgụ na-aga n'ihu dịgasị iche iche dị na steeti.